2021 को लागी खुदरा र उपभोक्ता खरीद प्रवृत्ति | Martech Zone
बुधबार, मार्च 3, 2021 बुधबार, मार्च 3, 2021 Douglas Karr
यदि त्यहाँ एक उद्योग छ जुन हामीले देख्यौं कि नाटकीय रूपमा यस गत बर्ष परिवर्तन भयो यो खुद्रा थियो। डिजिटली अपनाउनको लागि दृष्टि वा श्रोत बिनाको व्यवसायले आफैलाई लकडाउन र महामारीको कारण भग्नावशेषमा फेला पारे।
रिपोर्टका अनुसार २०२० मा रिटेल स्टोर क्लोजर ११,००० मा पुगे र केवल 11,000। नयाँ आउटलेट मात्र खोले।
कुराकानी व्यवसाय र राजनीति
त्यसले उपभोक्ता प्याकेज गरिएका सामानहरूको मागलाई परिवर्तन गर्दैन।सीपीजी), जबकि। उपभोक्ताहरू अनलाइन गए जहाँ उनीहरूसँग उत्पादनहरू पठाइएको थियो वा तिनीहरूले स्टोर पिकअप गरे।
RangeMe एक अनलाइन प्लेटफर्म हो जसले आपूर्तिकर्ताहरूलाई उनीहरूको ब्रान्डहरू बृद्धि गर्न र बढाउनको लागि सशक्तिकरण गर्दै उदाउँदो उत्पादनहरू पत्ता लगाउनको लागि खुद्रा खरीददारहरूलाई सक्षम गर्दछ। तिनीहरूले २०२१ का लागि शीर्ष रिटेल र सीपीजी प्रवृत्तिमा यस विस्तृत इन्फोग्राफिक उत्पादन गरेका छन्।
२२०११ व्यवसायका लागि भविष्य-प्रमाणको लागि समय हो किनकि हामी विश्वव्यापी महामारीको प्रभावहरू नेभिगेट गर्नका लागि गर्छौं। उपभोक्ताहरू, आपूर्तिकर्ताहरू, र खुद्रा विक्रेताहरूको लागि नयाँ उत्पाद खोजमा स्वास्थ्य र कल्याण र बढ्दो स्थिरता र विविधता पहलहरूमा हाइपरफोकस हुनेछ। किनमेल सुविधा, स्थानीय स्रोत, र मूल्य-चेतना मा जोड दिईनेछ।
२०२१ को लागि शीर्ष रिटेल र सीपीजी ट्रेंडहरू
शीर्ष रिटेल ट्रेन्डहरू
मूल्य सचेत खरीद Unemployment 44% किनमेल गर्नेहरूले बेरोजगारी दर बढ्ने क्रममा गैर-आवश्यक खरीदहरू कटौती गर्ने योजना गरेका छन्।
खरीद गर्नुहोस्-अब-भुक्तान-पछि - त्यहाँ एक २०% वृद्धि वर्ष-मा-वर्ष (YoY) को लागि खरीद छ-अब-भुक्तान-पछि खरीदहरू - बिक्री मा २ billion अरब को लेखा।
विविधता - सचेत उपभोक्तावादको यो नयाँ युगमा यस उद्योगले समावेशिता र विविधतालाई अगाडि ल्याउने र अल्पसंख्यक स्वामित्वको उत्पादनहरूलाई अगाडि र केन्द्रमा राख्ने काम गरिरहेको छ।
स्थिरता - वातावरणीय सचेत उपभोक्ताहरू उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्याकेजि ofको मात्रा घटाउन ब्रान्ड चाहन्छन्।
पसल सानो, स्थानीय पसल -% 46% उपभोक्ताहरू स्थानीय वा साना व्यवसायहरूसँग किनमेल हुने सम्भावना बढी हुन्छ यस विगतका बिदाको बिदाको बिदामा।
सुविधा -% 53% उपभोक्ताहरू तरिकाले किनमेल गर्ने योजना गर्दछ कि उनीहरूको समय बचत हुन्छ, जब यो न्यूनतम मूल्य हुँदैन।
इकमर्स - त्यहाँ अनलाइन शपिंगमा%%% वृद्धि भएको छ, संयुक्त राज्यमा बर्षको बर्षको लागि वार्षिक वृद्धि दर तिगुना!
बदलिएको ईंट र मोर्टार - stores 44% शीर्ष 500०० फुटबल विक्रेताहरू शारीरिक स्टोरहरूको साथ कर्बसाइड पिकअप, शिप-टु-स्टोर, र अनलाइन किन्नुहोस्, स्टोरमा उठ्नुहोस् (BOPIS)
उपभोक्ता खरीद व्यवहार प्रवृत्ति
लक्जरी र प्रीमियम indulgences - २०२० मा विलासी बिक्री गत वर्षमा%% ले वृद्धि भयो किनकि घरबाट काम गरिरहेका मानिसहरूले आफ्नो वातावरण सुधार गर्न र आफैलाई लाडमा हेरिरहेका थिए।
दिमाग र शरीर पोषण -% 73% खरिदकर्ताहरू उनीहरूको भलाईलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छन्; Health१% उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि अनुकूल वस्तुहरू किन्नुहोस् (वजन, मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा इत्यादि सहित)।
पेट स्वास्थ्य - २ global% विश्वव्यापी उपभोक्ताहरू पाचन स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त छन्। उपभोक्ताहरू उत्पादनहरूका लागि पहुँच गर्दै छन् जुन यसलाई समर्थन गर्दछन् र ती उत्पादनहरूलाई वेवास्ता गर्दै छन् जुन गर्दैनन।
परिधान बाउन्स पछाडि - महामारीको पछि लाग्नु जस्तै, उद्योगले यस वर्ष परिधान बिक्रीमा %०% वृद्धिको अपेक्षा गरिरहेको छ।
प्लान्ट-आधारित बूम - त्यहाँ स्वास्थ्य, भोजन विविधता, र उत्पादन उपलब्धता द्वारा संचालित ताजा बोट आधारित किराने की बिक्री मार्च मा एक 231% YoY वृद्धि थियो।
मकटेलहरू - त्यहाँ गैर मादक पेय पदार्थहरूको लागि गुगल खोजीमा %२% वृद्धि भयो!
ग्लोबल उपभोक्ता खरीद व्यवहार प्रवृत्ति
रोकथाम स्वास्थ्य - चिनियाँ उपभोक्ताहरु को %०% बचाव स्वास्थ्य देखभाल, भिटामिन र पूरक, र जैविक खाद्य पदार्थहरु मा अधिक खर्च गर्ने योजना।
फ्रि-प्रोडक्टबाटs - त्यहाँ खाद्य असहिष्णुता उत्पादनहरूको लागि%% वृद्धि भएको थियो। भियतनाममा, उदाहरणका लागि, दुग्ध-मुक्त दूध विकल्पहरू जस्तै नट-आधारित प्रकारको दूध लोकप्रियतामा बढ्दैछ।
शाकाहारी - २०००० मा British००,००० ब्रिटिश उपभोक्ताहरूले शाकाहारी आहार प्रयोग गरे! बेलायतका 400,000०० कम्पनीहरूले भेगाuaryनरीलाई बढावा दिए र १,२०० नयाँ शाकाहारी उत्पादनहरू सुरू गरे।
घरेलु सोर्सिंग - स्पेनका %०% उपभोक्ताहरूले स्पेनिश मूलका खाद्यान्न उत्पादनहरूलाई खरीदको आवश्यक कारकको रूपमा देखे। जर्मन उपभोक्ताहरूले स्थायित्व र सामाजिक जिम्मेवारीको लागि एक खरीद स्थानीय प्रवृत्ति ईन्धनको रूपमा।
टैग: परिधानबोपिसईंट र मोर्टारस्टोरमा अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्बन्द लूप एट्रिब्युसनउपभोक्ता खरिद गर्ने प्रवृत्तिउपभोक्ता प्याकेज सामानहरूघरेलु स्रोतअफलाईन बिक्रीomnichannel मार्केटिंगअनलाइन बिक्रीरोकथाम स्वास्थ्यमूल्य सचेतखुद्रा बिक्रीखुद्रा प्रवृत्तिस्थिरताशाकाहारी